Bandhigga carwada buugaagta Muqdisoh - BBC Somali
Bandhigga carwada buugaagta Muqdisoh
Magaalada Muqdisho waxa markii ugu horeysay mudo shan iyo labataan sano ah lagu qabtay munaasabad daaha looga rogayay bandhiga caalamiga ah ee buugaagta, waxaana buugaagtooda halkaasi ku soo bandhigay qoryaal caan ah oo isaga kala yimid gudaha iyo dibada dalka Soomaaliya.
Dadweyne farabadan oo xiisanayay buugaagta halkaasi lagu soo bandhigay ayaa durba bilaabay in ay iibsadaan. Waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay carwada qoraalo iyo riwaayado kala duwan oo ay curiyeen hal abuuro Soomaaliyeed.
Maxamad Sheekh Cali Diini oo ah madaxa bandhiga buugaagta ee Muqdisho ayaa Sheegay ujeedka ay ka leeyihiin bandhigan inuu yahay; in la xoojiyo dhaqanka aqoonta qoraalka iyo akhriska; in Muqdisho ay lamid noqoto caasimadaha kale ee aduunka ee sidan oo kale lagu qabto bandhiga wax curinta iyo in la xoojiyo dhaqamada wanwanaagsan ee ay Soomaalidu leeyihiin.
Kuxigeenka Duqa muqdisho Iimaan Nuur Iikar ayaa sheegay in bandhigani Muqdisho uga dhiganyahay in ay soo ceshato haybaddii magaalanimo ee ay lahayd ka hor dagaalkii sokeeye isagoo muujiyay sida uu ugu farxay in Muqdisho lagu qabto bandhig noocan ah.
Bandhiga ayaa socon doona mudo sedex maalmood ah, waxaana lagu soo bandhigi doonaa buugaag kala duwan oo ku qoran afaf ay kamid yihiin Soomaali, Carabi iyo Ingilish. Sidoo kale waxa lagu soo bandhigayaa qoraalo iyo suugaan ay curiyeen hal abuuro Soomaaliyeed.
Dad koox koox u socday oo u badan dhalinayaro iskugu jira kuwo dibadaha ka soo laabtay iyo kuwa wadanka sii joogay ayaa is dhexqaadayay gudaha hoolka iyagoo hadba beecinaya buugaagta xiisa galisa, waxaase sii dheeraa sawirada ay isaga qaadayeen taleefanka gacanta ee ay sitaan iyagoo si gaara isula sawirayay qorayaasha caanka ah ee goobta yimid.